EXCEL ကိုရှိ "IF" - EXCEL ကို - 2019
Photoshop မှာအရောင်တွေအစားထိုး - ရိုးရှင်းသော, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စဉ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျနော်တို့ဓါတ်ပုံတွေအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရာဝတ္ထုများ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။
ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်း Photoshop မှာအချောအင်္ဂါရပ်များအရောင်အစားထိုးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ် "အရောင်အစားထိုး" သို့မဟုတ် «အရောင်အစားထိုး» အင်္ဂလိပ်လို။
ငါသည်သင်တို့ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဤနည်းကိုသင် Photoshop မှာအရောင်တွေရဲ့အရောင်အဖြစ်အခြားမည်သည့်အရာဝတ္ထုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အိုင်ကွန်ကို ယူ. ကို Photoshop ထဲမှာဖွင့်လှစ်။
ကျနော်တို့ကိုအဆိုအတိုးပေါ်အရောင်ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, မီနူးကိုသွား "ပုံရိပ် - ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား - (- ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား - Image ကိုအရောင်အစားထိုးမည်) အရောင်အစားထိုး».
အရောင်အစားထိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်ပါတယ်။ ယခုငါတို့ဒီ tool ကို activate လုပ်ဖို့ကိုပြောင်းလဲမည့်အရောင်ကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Pipette" အရောင်ထဲမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်ကအရောင်တစ်ဦးအဖြစ်ခေါင်းစဉ်သောပေးတဲ့ dialog box ကို၏ထိပ်၌ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်ရပါလိမ့်မည် "အထီးကျန်ထားခြင်း".
အဆိုပါခေါင်းစဉ်၏အောက်ခြေတွင် "အစားထိုး" - လည်းမရှိ, သင်ရွေးချယ်ထားသောအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်က parameter သည်သတ်မှတ်ထားနိုင်ခင် "လွင့်စေ" ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးပိုကြီး, ပိုကအရောင်တွေကိုဖမ်းယူပါလိမျ့မယျ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျမွငျ့မားပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံရိပ်အားလုံးကိုအရောင်ကိုဖမ်းယူပါလိမျ့မယျ။
ချိန်ညှိ "အစားထိုးအရောင်များ" - သင်မြင်ချင်သောအရောင်ပေါ်မယ့်အစားကိုအစားထိုးခံရ။
ငါ parameters တွေကို setting များကအစိမ်းရောင်ကိုဖန်ဆင်း "Hue", "Saturation က" နှင့် "Brightness ကို".
စာနယ်ဇင်း - သင်ကအရောင်ကိုအစားထိုးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲသည့်အခါ "အိုကေ".
ပထမဦးဆုံးရန်တူညီသည့်အစီအစဉ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယလမ်း, ငါတို့ပြောနိုင်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကပိုပြီးခက်ခဲ image ကိုစဉ်းစားပါ။
ဥပမာအားဖြင့်, ငါကားနှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုရွေးယူကြ၏။ ယခုငါ Photoshop မှာယာဉ်အရောင်အစားထိုးသင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။
အမြဲအမျှကျွန်တော်တို့ဟာအစားထိုးရန်တံ့သောအရာကိုအရောင်ကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်အရောင်အကွာအဝေး၏ function ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ရွေးချယ်ရေးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်အရောင်အတွက် image ကို select လုပ်ပါ။
menu ကိုသွားပါ "အထီးကျန်ထားခြင်း - အရောင် Range (ကို Select လုပ်ပါ - အရောင် Range) »
ယင်း preview ကိုပြတင်းပေါက်၌အဖြူရောင်ခြယ် - Next ကိုကားအနီရောင်အရောင်ကို click ရန်နှင့်ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ image ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့အဖြူအရောင်ပြပွဲ။ ဤအမှု၌ပြန့်နှံ့နေတဲ့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းများ "အိုကေ".
အခုဆိုရင်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပုံရိပ်၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် - "ပုံရိပ် - ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား - Hue / Saturation (Image ကို - ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား - Hue / Saturation)".
တစ်ဦးကပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
ချက်ချင်း option ကို tick "Tone" (Bottom ညာဘက်) ။ ယခု parameters တွေကိုသုံးပြီး "Hue, Saturation ကများနှင့်တောက်ပမှု" သငျသညျအရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ငါအပြာတက်ထားကြ၏။
image ကိုဒေသများတွင်မူလအရောင်ရှိနေဆဲလျှင်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်။
image ကိုဖွင့်ပါနှင့်သစ်တစ်ခုအချည်းနှီးသောအလွှာကိုဖန်တီးပါ။ ရန် blending mode ကိုပြောင်းပေးပါ "Chroma".
ရွေးချယ်ခြင်း "Brush" နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအရောင်ကိုသတ်မှတ်။
သငျသညျကို Photoshop ထဲမှာမျက်စိအရောင်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်ဤနည်းလမ်းကို, ထိုအမှု၌သက်ဆိုင်သည်။
ဤရွေ့ကား Uncomplicated လုပ်ရပ်များလွင်ပြင်နှင့် gradient ကိုအဖြစ်, Photoshop မှာနောက်ခံအရောင်အဖြစ်မည်သည့်အရာဝတ္ထုများ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။